Ọnọdụ ọ bụla ebe a na-ebute nri ma ọ bụ ihe ọ drinksụ toụ na tebụl na-achọkarị ndụmọdụ. Ọnụ ego ahụ dabere na ụdị nri ị na-eri. Standardkpụrụ usoro maka ịtọpụ na Europe bụ ịhapụ otu akwụkwọ ego Euro ma ọ bụ abụọ n'elu ego ahụ ma ọ bụrụ na enwere mmanya gburugburu mana onweghị nri enyere iwu. Nri zuru ezu na gburugburu ịnọdụ ala dị iche. N'okwu a, euro ole na ole kwa onye na-ezukarị. Ise-ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ gafee Europe na-agụnyekarị n'ọnụ ha ụgwọ. Gbalịsie ike lelee nke a dịka ọ dịghị mkpa ịhapụ mgbakwunye ọnụahịa ọ gwụla ma ịnwere obi ụtọ maka ọrụ gị. Ọmarịcha ọrụ chọrọ oge ụfọdụ maka mgbakwunye, ya mere na n’ọnọdụ ndị a, ị nwere ike ịga n'ụzọ niile 15%.
Otutu mmadu choro inweta ntutu ohuru ohuru, ma ọ bụ ịhịa aka na-atụrụ ndụ mgbe ezumike. Luckily ị ga-ahụ spa na stylists niile Europe, esiwak ndidi ke kpukpru obio. Isi Okwu, na nke ọ bụla, na-abụkarị ihe dị ka pasent iri. Y’oburu n’inwe obi uto n’ozi nke enyerela gi, ị nwere ike ịga elu dịka 15%.
Ihe ị ga-echebara tagzi Na Transportgbọ njem
Taxi na Ubers bu ihe di n’ime ime Europe. Mgbe ị na-ahọrọ ihe ị ga-agbado, ọ kachasị mma iburu n’uche otu esi akwụ onye ọkwọ ụgbọala ahụ ụgwọ. n'ozuzu, ezie, ihe enyemaka Euro abụọ maka tagzi dị mkpirikpi ma ọ bụ njem Uber dabara adaba. Ngwa dị ka Uber na-enye gị ohere ịnye ọkwọ ụgbọ ala elektrọnik, ebe taxis ga-achọ ego. Ntinye aka na Europe mgbe ị na-eme njem bụ otu ihe ahụ ịsị mmadụ n'ụlọ mmanya ma ọ bụ n'ụlọ oriri. Buru n’uche na ọ bụghị mgbe niile ka ọ dị mkpa, ma enwere ekele mgbe niile. Iburu tiketi ụgbọ oloko gị gị European njem dị mfe ma dị mfe na Ndị dị ọnụ ala Train Tickets weebụsaịtị Na Worldwa.
Gris na Saịprọs
Hapụ opekata mpe a 5% n'ọnụ, na ego maka sava, ọbụlagodi na ụgwọ ahụ gụnyere enweghị ego. Ego bụ eze mgbe niile n'ọtụtụ mba Europe, Austria anaghịkwa iche.
Ndụmọdụ kachasị mma maka itinye aka na Europe bụ ịrụ ọrụ ụlọ gị. Gụọ ihe niile gbasara mba ahụ, ma ọ bụ obodo ị na-eme atụmatụ ịga. cheta na Njem ụgbọ oloko na-edukarị gị n'ọtụtụ mba ka inwere ike ịkwụsị na. Weta ego mgbe niile, mkpụrụ ego abụọ, na ego ole na ole idetu ego. Ọ bụrụ na ejighi n’aka na atumatu ndị a, rapara na iwu iri pasent maka ụlọ oriri, na otu iwu Euro maka ihe ọ bụla.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Kachasịsịsịshia Ntụziaka Ka Tipping Na Europe” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/guide-tipping-europe/?lang=ig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
#restaurant europetravel Food Inye aka na Europe Train Travel traveltips Ezumike